လူပြောများနေတဲ့ ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ဘာကြောင့်ရူးရလဲ ရှင်းပြီ ..”အဲ့ဒီ့ ရဲမေ ၁၈ ယောက်က ကျနော့်ကို လိင်အမြတ်ထုတ် အခွင့်အရေး ယူသွားတာဖြစ်လို့ခုလိုဖြစ်သွားတာ.. ပြန်တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေဟုဆို “ – Shwe Likes
လူပြောများနေတဲ့ ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ဘာကြောင့်ရူးရလဲ ရှင်းပြီ ..”အဲ့ဒီ့ ရဲမေ ၁၈ ယောက်က ကျနော့်ကို လိင်အမြတ်ထုတ် အခွင့်အရေး ယူသွားတာဖြစ်လို့ခုလိုဖြစ်သွားတာ.. ပြန်တရားစွဲဖို့ စီစဉ်နေဟုဆို “
ရဲ ရာထူးခန့် ချုပ် ဘာကြောင့် ရူး ရ လဲ ရှင်းပြီ ….
ရဲ ရာထူးခန့် ချုပ် ဇော်မိုးသန်း အနေဖြင့် ၎င်းအား တိုင်ကြားထား သည့် ရဲမေ ၁၈ ဦးအပေါ် ကာမ လာဘ်ထိုးမှု အပါအဝင် စိတ်ရောဂါဖြစ်ပေါ် ခံစားရမှု တို့ အတွက် တရားစွဲ ဆိုဖွယ် ရှိကြောင်း ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်းနှင့် နီးစပ်သူများ ထံ မှ သိရသည် ။ ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ၍ ဦးဇော်မိုးသန်း အားမေးမြန်းရာ ၎င်းမှ ယခုလိုဖြေကြားခဲ့ ပါသည်-
“ညည်း တို့ ရာထူးတိုး လိုချင်ရင်တော့ ငါနဲ့ လာအိပ်ရမယ် လို့ နောက်ပြောင် ကျီစယ်တဲ့ သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လွှတ် ခနဲပြောမိ လိုက်ရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတည်ပြောတယ် ထင်ပြီး ရောက်လာတော့ လည်း ကိုယ့်ကုသိုလ် နဲ့ကိုယ်ပဲလေ လို့မှတ် ယူလိုက်လျော ခဲ့တဲ့ သဘောပါပဲ….
ရဲရာထူးခန့်ချုပ် ဇော်မိုးသန်း မှ ပြန်လည်ပြော ဆိုထားကြောင်း သိရသည် ။
ရဲ ရာထူးခနျ့ ခြုပျ ဘာကွောငျ့ ရူး ရ လဲ ရှငျးပွီ ….
ရဲ ရာထူးခနျ့ ခြုပျ ဇျောမိုးသနျး အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးအား တိုငျကွားထား သညျ့ ရဲမေ ၁၈ ဦးအပျေါ ကာမ လာဘျထိုးမှု အပါအဝငျ စိတျရောဂါဖွဈပျေါ ခံစားရမှု တို့အတှကျ တရားစှဲ ဆိုဖှယျ ရှိကွောငျး ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျ ဇျောမိုးသနျးနှငျ့ နီးစပျသူမြား ထံ မှ သိရသညျ ။ ထိုကိစ်စနဲ့ပတျသကျ ၍ ဦးဇျောမိုးသနျး အားမေးမွနျးရာ ၎င်းငျးမှ ယခုလိုဖွကွေားခဲ့ ပါသညျ-
“ညညျး တို့ ရာထူးတိုး လိုခငျြရငျတော့ ငါနဲ့ လာအိပျရမယျ လို့ နောကျပွောငျ ကြီစယျတဲ့ သဘော နဲ့ ကိုဌေးဦး လိုပဲ လှတျ ခနဲပွောမိ လိုကျရုံပါ..”. ဒါကို သူတို့က အတညျပွောတယျ ထငျပွီး ရောကျလာတော့ လညျး ကိုယျ့ကုသိုလျ နဲ့ကိုယျပဲလေ လို့မှတျ ယူလိုကျလြော ခဲ့တဲ့ သဘောပါပဲ….
ကနြော့ဘကျက တရားစှဲ သငျ့တယျလို့ ယူဆမိ ပါတယျ… ဒါ့အပွငျ ကနြော့အနနေဲ့ တပျမတျောကိုစတငျ ဝငျရောကျစဉျကနေ အသှငျပွောငျးပွီးရဲရာထူးခနျ့ခြုပျဖွဈလို့ အခငျးမဖွဈပှားခငျအခြိနျထိ ကိုယျရောစိတျပါ ပကတိကနျြးမာ ခဲ့ပမေဲ့ အခုလိုတိုငျတနျးမှုတှဖွေဈမှ ရုတျခညျြးစိတျဝဒေနာသညျဘဝရောကျရတာဟာ အဲ့ဒီ၁၈ယောကျနဲ့အိပျပွီးမှ ဖွဈလာရတာကွောငျ့ ကနြော့ရဲ့စိတျကနျြးမာရေးခြို့ယှငျးမှုဖွဈရ တဲ့ တရားခံဟာ အဲ့ဒီ ၁၈ ယောကျကွောငျ့ဆိုတာ ထငျရှားသိသာ တဲ့ အတှကျ သူတို့ကိုတရားစှဲဖို့ စီစဉျတာဖွဈတယျ’ လို့.…
ရဲရာထူးခနျ့ခြုပျ ဇျောမိုးသနျး မှ ပွနျလညျပွော ဆိုထားကွောငျး သိရသညျ ။
ဒီကနေ့ မနက် ၁၀ နာရီ ကြေငြာချက်အရ စုစုပေါင်း အတည်ပြုလူနာ ၁၂၁ ဦးရှိပီး ရောဂါသက်သာပီး ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရသူ ၉ ဦးရှိလာ..
မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်စွာ အိမ်ဖောက်ထွင်း အကြမ်းဖက်မှု မရမ်းကုန်းမြို့နယ် အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွား
စာသင်ခန်း လား ကလပ် တစ်ခုလား မသဲကွဲတော့ တဲ့ (ဗွီယိုဖိုင်)…ကဲ မိဘတွေရေ ကြည့်ကြပါအုံးဗျာ ဖြစ်ပျက်နေတာကို